Amafu e-cirrus akha kanjani futhi abikezela ini? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunezinhlobonhlobo zezinhlobo zamafu esibhakabhakeni, kepha namhlanje sizokhuluma ngaleyo ejwayelekile esibhakabhakeni sethu: ifu le-cirrus.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi kungani zivela nokuthi yisiphi isibonakaliso sesikhathi asibonisayo?
1 Ukubukeka kwefu le-cirrus
2 ICirrus nokuguquka kwesimo sezulu
Ukubukeka kwefu le-cirrus
I-cirrus noma i-cirrus uhlobo lwamafu olwakhiwa amakristalu e-ice, ngoba zakhiwa endaweni ephakeme ngamamitha ayi-8.000. Kubonakala ngokuba namabhande amancane, amancane futhi akhiwe njenge-ponytail ekugcineni. Kwesinye isikhathi ifu elilodwa le-cirrus liyanezelwa kwelinye futhi livela lide kangangoba umuntu akakwazi ukuhlukanisa ukuthi yikuphi okuvela kokunye. Uma lokhu kwenzeka, babizwa ngokuthi i-cirrostratus.
Igama le-cirrus lisuselwa esiLatin i-cirrus y kusho ukusonga. Ngakho-ke, kubhekiswa ekubunjweni kwefu.
Amafu weCirrus akhombisa umehluko ekunyakazeni komoya phakathi kwaphezulu nangaphansi kwefu. Njengoba ukuqondiswa ngumoya kungashintsha, imingcele ye-cirrus ingahamba ngokushesha ngaphezu kongqimba lomoya futhi ingene kungqimba lomoya oluphansi futhi olusheshayo.
Imvamisa zivela ezindaweni eziphakeme eziphakathi kuka-8 no-12 km. Amakristalu eqhwa awayo lapho ifu lichithwa lihwamuka ngaphambi kokuwela phansi.
Ukuthi kune-cirrus esibhakabhakeni kungakhombisa ukuthi kukhona uhlelo olungaphambili noma ukuphazamiseka kwezingqimba ezingenhla. Bangakhombisa nokuthi isiphepho siyeza. Imvamisa, izingqimba ezinkulu zamafu e-cirrus yizo ezihambisana nokugeleza komoya okuphezulu kakhulu.
ICirrus nokuguquka kwesimo sezulu
I-Cirrus isebenza ngokubamba ukushisa okukhishwe nguMhlaba emuva esikhaleni ngesikhathi somthelela wokushisa, kepha futhi kuyasiza ukubonisa ukukhanya kwelanga ekufinyeleleni ngaphezulu. Akwaziwa kahle ukuthi kuthinta kanjani ngokucacile ibhalansi yamandla oMhlaba, kepha bayaziwa ngokufaka isandla ku-albedo yasemhlabeni.
Lesi sici kubalulekile ukuthi usibheke lapho ubikezela ukuguquka kwesimo sezulu.
Usuvele wazi okuthile okwengeziwe ngamafu esibhakabhakeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Amafu e-cirrus akha kanjani futhi abikezela ini?